[Ankapobeny ] 22 Jolay, 2008 08:17
Fandrindram-piterahana mety hahomby ve?
Ady @ hamaron'ny zaza teraka ankehitriny no fanamby omen'ny fitondrana ka mila arindra ny fiainam-pianakavina. Tsy vitsy mantsy ny fianakavina malagasy no mbola mihaotra ny zaza enina ao an-trano kanefa ny vola raisina tsy mahatoraka ny vola mivoaka @ famelomana. Mbola marikin'ny fahatrana ihany koa moa ny hamaron'ny zaza teraka. Tsy dia hita kosa anefa ny tena politika tena matipaika hiadina @ izy ity fa toa resaka ambony latabatra fotsiny no betsaka. Ka ireo mipetraka ety ambonivohitra sy misy ny serasera no tena madaitra fa ireo tambanivohitra kosa tena mbola lavitra ny asa. Eo ihany koa ilay soatoavina malagasy izay mahamenatra ny miresaka momba ny firaisana ara-nofo @ olona tsy fantatra sy eo @ ray aman-dreny sy zanaka.
Nambaran'ny filoham-pirenena kosa fa misy orinasa lehibe manao trafika na basy eto Madagasikara. Mampitandrina ny tenany fa tsy hitsitsitsitsy izay tratra @ izy ity. Nisy sary maromaro moa nasehony t@ izany ho porofo @ fisin'ilay trafika. Midadasika ny morotsiraka ary tsy azo lavina fa sarotra ny fanaraha-maso ny morotsiraka fa ilaina ny fiara-miasa @ vahoaka izany vao mety ho vita.
Mafotaka kosa ny lalao MMS tournement ao @ fahitalavitra MBS. Izy ity moa dia lalao @ PS2 ka lalao ady baolina kitra no atao ilay PES2008. Tena kinga tokoa ireo kilonga kely ary tsy diso anjara ihany koa ireo lehibe milalao sy manaraka azy ity. Ny tena moa mba milalao ihany fa eto @ solosaina eto ihany no mikatroka fa tsy sahy mifanejana @ ireo kilonga ireo satria azo antoka fa resy bobaka be ka aleo manaja tena. Ho tanterina miandalana eto ihany moa izay mety handrombaka ity lalao ity.
Nisondrotra omaly indray kosa ny vidin-tsolika ary 3100 Ar izy ankehitriny raha 2970 Ar teo aloha ny gazoala kosa dia 2980 Ar. Dia miaritra izay hiafarany eto moa ny rehetra fa hiteny inona intsony moa. Ny shell ihany no hany mbola nitazona ny vidiny taloha.